Fantaro i Ramjit Tudu, mpampiantrano ny kaonty twitter @AsiaLangsOnline ny 3 – 9 Sep 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2019 2:35 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Ελληνικά, English
Sary natolotr'i Ramjit Tudu
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo.Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Ramjit Tudu (@Ramjit_Tudu) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Izaho no Ramjit Tudu, avy any Mayurbhanj distrikan'i Odisha, India. Mpiteny teratany ny fiteny Santali aho. Mpianatra aho amin'izao fotoana izao. Mifanindran-dàlana amin'ny fianarako, dia miasa koa amin'ny fandraketana ho amin'ny endrika nomerika ireo fiteny natao an-jorom-bàla aho, toy ny Santali sy ny Ho, ankoatra ireo maro hafa. Tsy ela akory izay, natombokay ny ‘Filankevitr'ireo Vondrom-piarahamonina Voahilikilika’, fiarahana miasa amin'ny “O Foundation” (OFDN), ka izaho no mpiara-mandrindra tetikasa ao.
Iray amin'ireo fiteny ofisialy ao India ny Santali, ary fitenin'ireo vondrom-piarahamonina Santal ao amin'ny fanjakan'i Odisha, Bengal Andrefana, Jharkhand, Bihar, Assam ao India sy ny fanjakana sasany ao Nepal ary hatrany Bangladesh. Nampidirina ho ao anatin'ny fandaharam-pianarana ao Odisha, Bengal Andrefana ary Jharkhand io fiteny io. Miasa betsaka any anatin'ireo fampiharana aty anaty media sosialy ny Santali, toy ny Facebook sy WhatsApp. Na izany aza, mbola vitsivitsy ihany ireo tranonkala amin'ny fiteny Santali tanteraka. Vikashpedia sy Wikipedia no isan'ireo tranonkala vitsivitsy mitondra torohay momba ny fiteny Santali sy ireo vondrom-piarahamonina.
Satria aho miasa ho amin'ny fanomezana aina vao ny fiteny Santali, dia mitovy amin'izay no horesahako.
Ny fitiavako ny fiteniko sy ny tolona hitondràna azy io hilahatra amin'ireo fiteny hafa midongy sehatra no tena hery manosika ahy amin'ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteniko. Na mbola lavitra aza ny làlana hahatratrarako ny nofinofiko, amin'izao fotoana izao aho dia mikaroka izay fitaovana rehetra azo raisina, izay torohay na fahalalàna rehetra amin'ny resaka sehatra elektronika sy nomerika amin'ity fiteny ity sady miasa mankany amin'ny fanatratrarana io tanjona io ihany.